Ogaden News Agency (ONA) – Taxaalufka Xaaraanta ah ee Itobiya iyo Shabaabka ka dhexeeya
Taxaalufka Xaaraanta ah ee Itobiya iyo Shabaabka ka dhexeeya
Posted by ONA Admin	/ January 6, 2013
Dadka hoos ahaan ula socda siyaabaha ay Itobiya u fikirto iyo siyaasadda ay Geeska Afrika ka ciyarayso lama yaabana dhawaaqa ka soo yeedhay Itobiya ee sheegaya inay qabqabteen dhalinyaro Qaaacida ka socda oo rabay inay hawlo argagixiso ka fuliyaan gudaha Itobiya (Akhri).
Itobiya waxay aaminsantahay inay dagaal adag kula jirto xoogaga diidan ujeedada ay leedahay ee ah inuu caalamka u aqoonsado inay tahay awooda kali ah ee ka jirta gobolka Geeska Afrika. Mana aha arintaa mid ay bilaabeen Meles iyo kooxdiisa oo la kulmay burburkii Somaliya iyo isbadalada ka dhacay caalamka 9/11 wixii ka dambeeyay. Waxaan xusuusanaa warqaduu u qoray boqorkii Minilk qarnigii 18aad xoogagii reer Yurub ee ku looltamay boobkii Afrika (the African scramble), isagoo ka codsanaya in la tixgaliyo oo la siiyo qaybtiisa maadaama ay yihiin siduu hadalka u dhigay, Jaziirad Masiixi ah oo ku dhex jirta badweyn gaala ah uu ula jeedo muslimiinta. Ka dibna wuxuu ka dhex faa’idaystay tartankii ka dhexeeyay quwadihii Yurub ee damaca ka lahaa Geeska Afrika – Ingriiska, Talyaaniga iyo Faransiiskii, halkaasoo uu hub iyo rasaas ka kala helay. Waxaad moodaa inay taariikhdii oo sikale u qoran isa soo majiirtay. Somali muuqata oon jirin, quwado reer Galbeed ah oo Mareykanka uu hogaaminayo iyo reer Bariga oo markan ay quwada dhaqaale ee Shiinaha hogaaminayso oo tartan iyo boob cusub ku soo qaaday Afrika.
Itobiya waa dawlad ku dhisantay gumaysi iyo dhul balaadhsi oo aad u taqaana siyaabaha la’isu daadraaciyo kolba mawjada socota. Maadaama nidaamka TPLF/EPRDF uu la kulmay waqti quwadii caalamka ugu xooga badnayd u tafaxaydatay ladagaalanka waxay ugu yeedheen Argagixisada Caalamiga (Al-Qaacida), waxay durbadiiba abuurtay jawi ah inay Itobiya qudheeda ku yihiin halis kooxahaa argagixsada ah oo sida Mareykanka ay ula dagaalamayaan. Si loo rumaysto marka waa inay keento wax la arki karo oo muuqda.
Inkastoo ay jiraan dad badan oo ka soo horjeeda waxa loo yaqaano –Nadariyadda Mu’aamarada – ama (Conspiracy Theory), hadana inay Itobiya ku dhex leedahay kooxda (Al-Shabaab) ciidan badan oo Istraatiijiyada iyo habka ay u hawlgalayaanba ay Sirdoonka Itobiya gacanta ku hayaan, ma’aha wax hadda caaamka ka qarsoon. Waxaa laga yaabaa mudooyinkii hore inay Itobiya sabab uga dhigi jirtay arintaa say ula socoto sirta iyo qorshaha kooxda Al-Shabaabka ay maagan yihiin. Taasoo caalamka sirdoonka si dhibyar uga dhaadhici karta, maadaama ay jiraan qaar badan oo laga yaabo inay reer Galbeedka ku xidhan yihiin hadana la socda Al-Qaacida. Hasa ahaatee, waxaa la ogaaday waqti dambe in qorshaha Itobiya iyo licbadda ay ciyaarayso ay ka fogtahay siyaabihii ay uga iibisay reer Gakbeedka ee ahaa in Al-Shabaab ay khatar ku yihiin amniga Itobiya oy kula dagaalamayso Somaliya. Waxaa la ogaaday inay hubka intiisa badan ka helaan Itobiya, isla marahaantaa ayna diyaar u ahayn in Al-Shabaab laga sifeeyo Somaliya. Arintan waxaa si dhab ah loo ogaaday markii dawladda Kenya oo taageera ka hilaysa reer Galbeedka ay go’aansatay inay Jubada Hoose ka sifeyso Al-Shabaab. Talaabadii 1aad ee Itobiya ku fashilantay waxay ahayd dayaaradihii hubka u siday Al-Shabaab ee Baydhabo ka soo dagay. Iyadoon meel kale laga ogaanin waxaa ku dhawaaqay qaar ka tirsanaa xukuumadii Sheekha Shariif ee sida tooska ah ugu xidhnaa Itobiya, iyagoo ku eedeeyey inay Eretreeya soo dirtay hubkaa. Arintii markii la baadhay, waxay noqotay in la dado oo laga aamuso, maadaama ay salka lagashay Itobiya. Waxay dadweynaha dagan Bay iyo Bakool indhahooda ku arkeen oo meelwalba ay gaadhsiiyeen inuu ciidanka Itobiya si toos ah u keeno hubka Somaliya oo meel intay uga tagaan saacada ka dib ay Shabaabka yimaadaan kana qaataan. Waxyaabaha lala yaabo waxaa ka mid ahaa inay ciidanka Itobiya iyo Shabaabka marnaba dagaal fool ka fool ah isaga horimaanin. Oo ciidanka Itobiya ay sii sheegaan meesha ay ku soo beegan yhiin, Shabaabkana ay sii baneeyaan.
Maxaa hadda soo kordhay? Waxaa soo kordhay inuu kacdoon dadweyne oo xoogan oo dadka muslimiinta Itobiya ay ku diidan yihiin faragalinta qaawan ee xukuumadda EPRDF-ta ku hayso diimaha gaar ahaan Islaamka ka bilowday Adisababa. Banaabaxyo ayaa socda laga soo bilaabo sanadkii tagay oo lagu diidanyahay koox Libnaan lagu soo tababaray oo dawladda Iran ay lacaga farabadan ku bixsay inay ku faafiyaan Itobiya madhabka Shiicada. Haya’adaha caalamka ee xuquuqda qofka u dooda iyo xoriyadda diimaha waxay wada taageereen banaanbaxyada dadweynaha Itobiya ee muslimiinta ah ay kaga soo horjeedaan faragalinta diimaha.
Itobiya say uga dhigto banaanbaxyadaa inay khatar ku yihiin jiritaankeeda, gaara ahaan dadka Masiixga ah ee xukunka dalkaa gacanta ku haya, waa inay abuurtaa inuu xidhiidh ka dhexeeyo –Argagixsada iyo Banaabaxyada – taasoo dareenka reer Galbeedka soo jeedinaysa. Aad ayayna ugu sahlantahay Itobiya inay koox Al-Shabaabka ah soo galiso Adisababa oo waliba ay qaraxyo ka ridaan ay dad badan wax ku noqdaan si riwaayada ah argagixsadii Somaliya lagaga adkaaday ayaa soo galay oo halkaasi ay hal dhagax ku disho laba shimbirood oo laba geed kala saaran. Inay banaanbaxyada sii xoogaysanaya kaga hortagto, isla marahaantaana ay ku kasbato reer Galbeedka oo hadda fahmay qaskii ay Itobiya ka waday Somaliya.
heer sare weeye war bixintan waana arrin culayskeeda leh aan lasocono isbadalada iyo doorka gumaysiga